Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata Track Link Guard n'ogbe |Pingtai
Track Link Nche
Ịkwanye ikike: 50000 PCS / ọnwa
Kedu uru ndị nche njikọ egwu
Ụdị akụrụngwa ahụ metụtara ihe nche njikọ ụzọ egwu ọhụrụ ejiri na gwupụta ihe na bulldozer.Igwe nche nke yinye nwere ike nhazi dị elu nwere ike igbochi nbibi nke iyi na dọkasị ahụ nke ọma, nke na-eduga na njedebe na nkwụsị nke egwu egwu bulldozer nke excavator.Ọ nwere ike igbochi de-chaining nke ọma ma rụọ ọrụ dị oke mkpa.E ji mara ya bụ na abụọ myirịta erection nke arch osisi na ma n'ihu na mgbe abụọ iberibe isi efere na ala Central ka arch ọ bụla set nwere vaulted ezumike, onye ọ bụla nke isi efere maka nri Angle ehulata, onye ọ bụla arch efere tupu na mgbe. akụkụ abụọ na ala na isi efere na-ehulata elu fastening, onye ọ bụla arch efere na-ehulata n'okpuru ala na isi efere nke fastening, onye ọ bụla nke isi efere na-ehulata n'okpuru abụọ n'okpuru akụkụ na-n'otu n'otu na-nyere na okirikiri fastening oghere. , na n'etiti n'ime akụkụ nke ala na-ehulata elu nke ọ bụla ala nkuku efere na-nyere a square n'ọnọdu uzo.Ụdị ihe eji eme ihe nwere uru nke nhazi akwụkwọ akụkọ, ọdịdị oge niile, ngwakọta usoro sayensị, nkà na ụzụ dị elu karị, ihe eji eme ihe, ike dị elu, àgwà kwụsiri ike karị, nke siri ike ma dịgidere, na ogologo ndụ ọrụ.
Ụfọdụ nsogbu nkịtị na-eduga na excavator bulldozer caterpillar dechain
1. Dechain mere site tensioning adjuster cylinder ọdịda.
N'oge a, kwesịrị ịlele ma tightening mmanụ cylinder chefuo iti bọta, hụ ma tightening mmanụ cylinder mmanụ ntapu onu.
2. Dechain kpatara site na oke iyi egwu njikọ.
Ọ bụrụ na ejiri ya ogologo oge, a na-eyi egwu ahụ n'ezie, na iyi nke eriri eriri, barel na ihe ndị ọzọ dị na egwu ahụ ga-edugakwa n'agbụ egwu.
3. Ịkwụsị njikọ n'ihi iyi mkpuchi nke yinye.
Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-egwupụta ihe niile nwere ihe nchebe nke agbụ na crawler, na ndị na-ahụ maka agbụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa n'ịgbochi imechi, n'ihi ya, ọ dịkwa oke mkpa ịlele ma a na-eyi ihe mkpuchi agbụ.
4. mbanye moto gia mgbanaka kpatara yinye.
Maka mgbanaka mgbanaka nke moto mbanye, ọ bụrụ na uwe ahụ dị njọ, anyị kwesịrị iji dochie ya, nke bụkwa ihe dị mkpa maka eriri nke excavator.
5. Ịkwụsị njikọ nke ihe nbibi nke ihe rola na-ebu na egwu egwu kpatara.
N'ozuzu, mwepu mmanụ nke akara sprocket ga-eduga n'ịdị njọ nke sprocket, nke ga-eduga na nkwụsị nke crawler.
6. Dechain kpatara mmebi nke n'ihu idler.
Mgbe ị na-ele anya idlre n'ihu, ọ dị mkpa ịlele na kposara na n'ihu idler adịghị efu ma ọ bụ gbajiri.
Otu esi zere ndakpọ nke excavator bulldozer chian
1.Mgbe ị na-eje ije na saịtị ahụ, biko gbalịa itinye moto na-eje ije n'azụ ije iji belata extrusion nke sprocket.
2. Oge njem na-aga n'ihu nke igwe agaghị agafe awa 2, na oge ije ije na ebe a na-ewu ụlọ ga-ebelata dị ka o kwere mee.Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a na-atụ aro ka ị na-eje ije ma obere oge kwụsịtụrụ.
3.mgbe ị na-eje ije iji zere ihe ndị siri ike na-apụta, ka ọ ghara ime ka nrụgide na-etinye na eriri ụgbọ oloko.
4. Kwado ike nke egwu ahụ, dozie egwu ahụ nke ọma na ebe dị nro dị ka ala, ma dozie egwu ahụ nke ọma mgbe ị na-eje ije na nkume. Ọ dịghị mma ma ọ bụ nke siri ike.Ịtọhapụ nke ukwuu ga-eme ka egwu ahụ daa n'ụzọ dị mfe, yana nke siri ike ga-eme ka yinye aka yinye ngwa ngwa.
5. na-enyochakarị ma e nwere nkume na-etinye aka na crawler na ndị ọzọ mba ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ihicha.
6.na-arụ ọrụ n'ebe apịtị dị, na-emekarị ala nke edobere n'ahịrị egwu.
7. Gbalịa ka ịzenarị onye na-egwupụta ihe na-atụgharị na ọnọdụ.
8. Lelee ihe nchekwa ụgbọ oloko na ihe nchekwa ụgbọ oloko welded n'okpuru wiil ntuziaka mgbe niile.
Nkọwa: Track Link Nche
Ikike inye: 50000 PCS / ọnwa
Isi ike: HRC55-68
Oge ikike: Ọnwa 24
Nke gara aga: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ùkwù China Good Quality 40cr Excavator Undercarriage Parts Bushing / Bucket Pin /Teeth Pin
Osote: D41 D41A D41e D41p D41q D41s Upper Roller maka Komatsu Bulldozer na Excavator Top Carrier Roller
Bulldozer track chain nche
Crawler n'okpuru mkpuchi yinye
Onye na-egwupụta ihe na-echekwa ihe nche yinye
Onye nche egwu egwu egwu
Sochie ihe nche igwe
D9N IDLER GRP azụ
Yiri akụkụ BULLDOZER D50
Komatsu D475 Onye na-ebu Roller 198-30-00810
D475 Track Sprocket Nkeji eze 198-27-42281...
Roba Track Rollers, Ebu n'okpuru ụgbọ ala Excavator, Bolt siri ike, Ihe na-agba Track Roller, Excavator ịwụ ịcha Edge, Akụkụ ihe mkpuchi ịwụ ịwụ,